8 Hena na ɔte sɛ onyansafo?+ Na hena na onim biribi ase kyerɛ?+ Onipa nyansa ma n’anim hyerɛn, na n’anim muna dan animtew.+ 2 Nea mereka ne sɛ: “Obu a wowɔ ma Onyankopɔn ntam nti,+ di ɔhene ahyɛde so.+ 3 Mpere wo ho mfi n’anim nkɔ.+ Nnyina adebɔne mu,+ na nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara, ɔbɛyɛ,+ 4 efisɛ ɔhene anom asɛm na ɛwɔ tumi;+ na hena na obetumi aka akyerɛ no sɛ: ‘Dɛn na woreyɛ yi?’” 5 Nea odi ahyɛde so no, bɔne bi remma no so,+ na onyansafo koma behu bere ne atemmu.+ 6 Bere ne atemmu wɔ hɔ ma ade biara,+ efisɛ amanehunu dɔɔso wɔ adesamma so.+ 7 Obi nnim ɔkyena asɛm,+ na nea ɛbɛba no, hena na obetumi akyerɛ sɛnea ɛbɛba? 8 Ɔdesani biara nni ne honhom so tumi a ɔde besiw honhom+ no kwan; saa ara nso na obiara nni owuda so tumi;+ na ahofadi biara nni akodi no mu.+ Amumɔyɛde nso ntumi nnye amumɔyɛfo nkwa.+ 9 Eyi nyinaa mahu, na mede me koma adi adwuma biara a wɔyɛ owia ase no akyi; ɛbere no mu na onipa di onipa so ma ewie no bɔne.+ 10 Eyi te saa de, nanso mahu nnebɔneyɛfo sɛ wɔasie wɔn,+ na mahu sɛnea wɔbae ne sɛnea wofi kronkronbea+ hɔ kɔe, na nnipa werɛ fii wɔn wɔ kurow a wɔyɛɛ wɔn nneyɛe no wom no mu.+ Eyi nso yɛ ahuhude. 11 Nnebɔne a wommu ho atɛn ntɛm+ nti, nnipa mma ayɛ wɔn adwene sɛ wobedi bɔne.+ 12 Sɛ ɔbɔnefo yɛ bɔne+ mpɛn ɔha, na ɔtena ase kyɛ sɛnea ɛsɔ n’ani mpo a, minim sɛ ebesi wɔn a wosuro nokware Nyankopɔn no yiye,+ osuro a wɔwɔ+ no nti. 13 Na ɔdebɔneyɛfo de, ɛrensi no yiye+ koraa; ne nna te sɛ sunsuma,+ na ɔrentumi mma ɛnyɛ tenten, efisɛ onsuro Onyankopɔn.+ 14 Ahuhude bi wɔ asase so; ɛne sɛ treneefo bi wɔ hɔ a nea ɛfata nnebɔneyɛfo nnwuma na ɛto wɔn,+ na nnebɔneyɛfo bi nso wɔ hɔ a, nea ɛfata treneefo nnwuma na ɛto wɔn.+ Mekae sɛ eyi nso yɛ ahuhude. 15 Ɛnna mekamfoo anigye,+ efisɛ nnipa wɔ hɔ yi, adepa biara nni hɔ mma wɔn owia ase sɛ wobedidi na wɔanom na wɔagye wɔn ani; eyi na ɛka wɔn ho wɔn brɛ mu, wɔn nkwa nna+ a nokware Nyankopɔn de ama wɔn owia ase+ no nyinaa mu. 16 Eyi mu de, mede me koma+ hwehwɛɛ nyansa sɛ mehu nnwuma a wɔyɛ wɔ asase so,+ efisɛ obi wɔ hɔ a nna nkɔ n’aniwa so awia ne anadwo nyinaa.+ 17 Na mihuu nokware Nyankopɔn no nnwuma nyinaa,+ sɛ adesamma ntumi nhu adwuma a wɔayɛ owia ase no;+ adesamma brɛ wɔn ho daa hwehwɛ mu, nanso wonhu.+ Sɛ wɔka sɛ wɔyɛ anyansafo nti wobehu+ mpo a, wɔrenhu.+